5 Mahafatifaty Indrindra Harena Miafina Ao Belzika | Save A Train
Home > Travel Europe > 5 Mahafatifaty Indrindra Harena Miafina Ao Belzika
Fotoana famakiana: 5 minitra(Last Nohavaozina: 25/01/2021)
Save A Train dia mitondra anao 5 Mahafatifaty indrindra Harena Miafina Ao Belzika mba hitsidika! Misy kokoa any Belzika noho ny labiera. Nahita quirky lapa, miafina sary sokitra, sy ny tanàna izay mbola tsy ao ny radara hatrany, fa tokony ho tanteraka! Belzika dia tsy lany harena miafina tsy ho ela dia raiki-pitia.
1. Ny Underrated Tanànan'i Mechelen
Mechelen dia nisasaka eo Brussels sy Antwerp. Ny afovoan-tanàna dia miavaka amin'ny gabled Renaissance trano, tsara naverina tamin'ny laoniny, raha mbola an-tsena dia anjakan'ny ny Gothic katedraly andaniny sy ny lapan'ny tanàna, koa Gothic, Etsy an-. Mechelen matetika ninia tsy nijery manohana kokoa ny toerana be. Na izany aza, rangotra, ratra kely ambanin'ny ambonin'ny ary ianao tsy ho ela hahita tsara tarehy Belzika ponenana izay mendrika loatra ny fotoana, raha ao ny firenena sy tena iray amin'ireo Harena Miafina Ao Belzika mba hitsidika!
Ny Bruxelles-to-Mechlen Fiaran-dalamby
Anvers ny Mechlen Fiaran-dalamby
Lainga Mechlen Fiaran-dalamby
Ny tanàna kely izay afaka (amin'ny siramamy!) Raha toa ianao ka mbola nankafy ny siramamy cube miaraka ny vaovao kafe na dite, Ary azo antoka fa izany dia mety efa ampiasaina any amin'ny tanàna kely ny Tienen. Kely io tanàna tsy lavitry ny Leuven. Ho eny amin'ny lalan'ny voadaroka ary tao am-pon'ny Flemish Brabant any Flanders, izany ponenana dia indray mandeha ao am-Romanina seramika sy ny fitaratra ny fanaovana! Izany no iray amin'ireo antony lehibe indrindra dia iray amin'ireo harena miafina mba hitsidika In Belzika!
Betsaka kokoa ny zavatra mila an'i Tienen noho ny fahitana azy. Jereo any an-dafin'ny miharihary fiangonana lehibe. Soak ny ambiance ary sample ny nahandro ao an-toerana (nentim-paharazana maro ahitana Flemish nahandro hena-mavesatra foto-tsakafo toy ny sakafo ketsaketsa, meatballs, ary ny betsimitsitekiteky).
Ny endri-javatra tsy maintsy hita maso ao an-tanàna dia ny Sint Germanuskerk, miavaka fiangonana Romanesque nofaranan'ny paikady iray UNESCO belfry ary niaraka indray ny taonjato faha-13. Volana Jolay sy Aogositra, carillon fampisehoana hatao isaky ny alarobia. Manampy izany ny kalandrie!
Lainga ny Folo Fiaran-dalamby
Bruxelles ny Folo ora Fiaran-dalamby
Anvers ny Tienen Fiaran-dalamby
Namur, amin'ny Folo ora Fiaran-dalamby
Azonao atao mora foana misambotra ny fiaran-dalamby miaraka amin'ny fanampian'ny Hamonjy Ny Fiaran-dalamby ho any Bruxelles. Avy eo dia haingana ny telo-polo minitra mitaingina atsimo ny tanàna Hoeilaart. Ho hitanao ato ny vavahady ny Sonian Ala ary ny anankiray ny 5 Mahafatifaty Indrindra Harena Miafina Ao Belzika mitsidika!
Raha tia trandrahana zavaboary, izany no tanteraka fototra, ivelan'ny be atao Brussels. Tsidiho ny Forest Museum Jan Van Ruusbroec, mba hianatra momba ny ala alohan'ny trandrahana iray amin'ireo maro mandeha lalana.
Hoeilaart manana vatosoa miafina hafa; izany dia an-trano ny tsara indrindra dia ny voaloboka any Belzika. Hoeilaart dia raha vao fantatra amin'ny anarana hoe ny fitaratra tanàna satria ny rehetra ny voaloboka feno greenhouses. Raha famokarana efa nihena nandritra ny taona maro, Hoeilaart voaloboka Mbola sarobidy nanerana ny firenena, ary mivarotra avy haingana dia haingana, izany no tsara indrindra mba handeha mahitsy ny loharanom-baovao mba hahazo ny tanana azy ireo.
Lille mba Hoeilaart Fiaran-dalamby
Anvers ny Hoeilaart Fiaran-dalamby
Liege ny Hoeilaart Fiaran-dalamby
4. Mahafatifaty Miafina Gem – Tongeren, Limburg
Fitsidihana ny tanàna tranainy indrindra ao Belzika. Ny anaram-bositra nomena noho ny manan-karena Gallo Roman tantara. Famantarana ity tantara ity dia hita manerana ny tanàna, fa ny teboka fanombohana tsara indrindra dia ny Museum Romana Gallo nahazo loka. Raha vao tafalatsaka ny tenanao ao amin'ny fifandraisana ny fampirantiana, mamely ny arabe amin'ny iray amin'ireo mitarika tena fitsangatsanganana an-tongotra hahitana ireo sosona tantara ao Tongeren.
Kely io tanàna roa UNESCO voatanisa tsangambato, ny belfry ny Basilica de Ny Lady sy ny beguinage. Fantaro ny momba ny ain'ny ny Beguines, vehivavy izay nanolo-tena ho amin'ny fiangonana, amin'ny Beguinage Museum Beghina. Rehefa Alahady, Tongeren, tompon'ny maro Beneluxs fahagola lehibe indrindra tsena, maherin'ny 350 mpiantsena mivarotra fahagola hatramin'ny vanim-potoana rehetra tamin'ny tantara.
Raha toa ka mbola tsy nanana ny hameno ny lasa 5 Mahafatifaty Indrindra Harena Miafina Ao Belzika, mijanona amin'ny teo akaiky teo Alden Beisen Castle ho an'ny hoe nandeha ny tarehy amin'ny alalan'ny ôfisialy zaridaina.
Maastricht ny Tongeren Fiaran-dalamby
Liege ny Tongeren Fiaran-dalamby
Aachen ny Tongeren Fiaran-dalamby
Bonn ny Tongeren Fiaran-dalamby
5. Mahafatifaty Miafina Gem – Binche, Hainaut
Ny tanàna Binche ao amin'ny Belza faritra Hainaut mijery toy ny maro hafa kely ny tanàna ao Wallonia. Izany dia te hatory karazana toerana iray ihany no lehibe mpizaha tany attraction, ny tena tsara ny Fetibe Iraisam-pirenena Museum sy ny saron-tava, na NENY.
Tamin'ny andro nialoha ny Ash Alarobia, Binche dia na inona na inona, fa te hatory. Ny Fetibe ny Binche Tsy manam-paharoa eo amin'izao tontolo izao, ary azo antoka fa miafina vatosoa! Ny fankalazana dia midika be pitsiny akanjo, mozika, dihy, ary tsara tarehy kely ny fisotroana sy ny mahafinaritra! Izany no izy raha ny marina manokana, fa voasoratra ho toy ny Sangan'asa ny Oral sy intangible Heritage ny Olombelona amin'ny UNESCO.
Ny fampianarana sy ny fombafomba afaka tanteraka toa tsy hay hazavaina ny any ivelany, soa ihany NENY dia tsy mba hanazava ny zava-drehetra eo amin'ny mazava ny an-tsipiriany. Nanatrika ny Fetibe Binche dia marina tokoa traikefa tsy hay hadinoina.
Bruxelles ny Binche Fiaran-dalamby
Anvers ny Binche Fiaran-dalamby
Lille mba Binche Fiaran-dalamby
Reims ny Binche Fiaran-dalamby
Vonona ny hahita ny 5 Mahafatifaty Indrindra Harena Miafina Ao Belzika? Avy eo lohany ihany ho any Save A Train ankehitriny. Boky in minitra ka tsy miafina vola lany, miafina fotsiny vatosoa!
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “5 Mahafatifaty Indrindra Harena Miafina Ao Belzika” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fhidden-gems-belgium%2F – (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, ary afaka hanova ny / de ny / en na / en sy ny maro hafa fiteny.